Search အာလူးအာဂျွန် မြန်မာစာတန်းထိုး - BajarFB.com
Search Results - အာလူးအာဂျွန် မြန်မာစာတန်းထိုး
အာလူးအာဂျွန် ဇာတ်ကားနမူနာ မြန်မာစာတန်းထိုး...... 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 Credit....
အာလူးအာဂျွန် ဇာတ်ကားနမူနာ မြန်မာစာတန်းထိုး...... 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 Credit.... အာလူးအာဂျွန် 11 Dec 2019 · 77K views
Sarrainodu မြန်မာစာတန်းထိုး အာလူးအာဂျွန် ========================== #ဇာတ်ကားကောင်းလေးတွေကြည့်ချင်ရင် ပိုစတာ..comment သို့ ဒီနေ့တော့ယူတို့ရဲ့အားလူးအာဂျွန်းကားလေးနော် လူမှန် (အားလူးဟုခေါ်သည်) ဖြေရှင်းမရ ကိုင်တွယ်ရခက်တဲ့ အထက်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ အမှုတွေဆို ကိုင်ပေးပြီး တရားရုံးမှာ တခါမွ မနိုင်ဖူးတဲ့ ရှေ့နေ စရီပါသီဆိုသူ ရှိပါတယ်..... သူက တရားရုံးမှာသာ မနိုင်တာ တရားရုံးက မစီရင်နိုင်တဲ့ အမွုဆို ပြင်ပမှာ အမြဲနိုင်ပါတယ်... ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ သားလိုချစ်ရသူ တူတော်မောင် ဂန်နာကြောင့်ပါ... ဂန္နာဆိုတာ စစ်တပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး ရာထူးတိုးခါနီးမွ စိတ်မပါလို့ ထွက်လာပြီး မိန်းကလေးရှင်တိုင်းက ငြင်းလွှတ်တဲ့ တရက္ကို ၂ ကြိမ် ရန်ဖြစ်သူ တယောက်ပါ... ကောင်းတဲ့စိတ်က မတရားတာဆို လက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်သလို သူ့ဦးလေးရဲ့ တရားပြင်ပ ကိစ္စဆို လိုက်ဖြေရှင်းပေးတာပါပဲ... ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့ သား ဒါနူမှာ နိုင်ငံခြားနဲ့ သေဘာတူထားတဲ့ ဆီပရောဂျက်ရှိပါတယ်... အဲဒီပရောဂျက်အတွက် ဆီပိုက်လိုင်း ဖြတ်သန်းရာ နယ်တွေမှာရှိတဲ့ လယ်ကွက်တွေကို မတရားသဖြင့် လိုက်သိမ်းပိုက်နေပါတယ်... ၀န်ကြီးချုပ်သားကလဲ ဖြစ် လက္ကလဲ မရွံ့တော့ သူ့အမှုဆို လက်ရှောင်ကြတာ များပါတယ်... ဟန္စီသာဆိုတာ သူ့အဖေ ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အမတ်ဖြစ်နေသူလေးပါ... တိုင်းကျိုးပြည်ပြု လုပ်ငန်း လုပ်နေရင်း ဂန္နာက သတို့သမီးလောင်း နောက်တယောက်ကို ကြည့်ဖို့အသွားမှာ မျက်စိကျပြီး ချစ်ခွင့်ပန်ခြင်းခံရသူပါ...... အစပိုင်းမှာတော့ ဂန္နာကို လူပေလူလွင့် အားနေရင် ရန်ဖြစ်သူလို့ ထင်ပေမယ့် ဂန္နာရဲ့ လူသားဆန်မှု၊ ဥပေဒက မစီရင်ပေးနိုင်တာကို တရားမျှတအောင် လုပ်ပေးမှုတွေ ကြောင့်နောက်ဆုံး လက္ထပ္ဖို့အထိ ဖြစ်လာသူပါ... .. သို့သော် လက်မထပ်ခင် ဂန္နာကို ကတိတခုတောင်းပါတယ် နောက် ဘယ်တော့မှ ဘယ်အကြောင်းနဲ့မှ ရန္မျဖစ္ဖို့ပါ... ဂျာနူး... သူမကေတာ့ ဂန်နာအဖေ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့ သမီးပါ... ဂန်နာနဲ့ ထိမ်းမြားဖို့ သွားကြည့်ခိုင်းတဲ့ သတို့သမီးတယောက်ပါပဲ... တဖက်မှာလဲ ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့သားဖြစ်သူက မတရားသဖြင့် လယ်မြေတွေ သိမ်းပိုက်မှုကို တွန်းလှန်နေသူတယောက်လဲ ဖြစ်ပါတယ်... ဂန်နာက အမတျမလေးနဲ့ ဘယ်လို ဆက်သွားမလဲ??? ဂျာနူးကရော သူတို့ နှစ်ယောက်ကြား ဘယ္လို ၀င်လာမလဲ??? ၀န်ကြီးချုပ်သားနဲ့ရော ဘယ်လိုတွေ ထိပ်တိုက်တွေ့စရာ ကိစ္စတွေ ကြုံလာမလဲ??? ဘယ္လို ပညာပေးမလဲ??? အက်ရှင်တွေကရော ဘယ္လို ခ်မလဲ ဆိုတာကို တော့ အာလူးအာဂျွန်ရဲ့ "လူမှန်" ကားလေး ရှုစားကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်
Sarrainodu မြန်မာစာတန်းထိုး အာလူးအာဂျွန် ========================== #ဇာတ်ကားကောင်းလေးတွေကြည့်ချင်ရင် ပိုစတာ..comment သို့ ဒီနေ့တော့ယူတို့ရဲ့အားလူးအာဂျွန်းကားလေးနော် လူမှန် (အားလူးဟုခေါ်သည်) ဖြေရှင်းမရ ကိုင်တွယ်ရခက်တဲ့ အထက်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ အမှုတွေဆို ကိုင်ပေးပြီး တရားရုံးမှာ တခါမွ မနိုင်ဖူးတဲ့ ရှေ့နေ စရီပါသီဆိုသူ ရှိပါတယ်..... သူက တရားရုံးမှာသာ မနိုင်တာ တရားရုံးက မစီရင်နိုင်တဲ့ အမွုဆို ပြင်ပမှာ အမြဲနိုင်ပါတယ်... ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ သားလိုချစ်ရသူ တူတော်မောင် ဂန်နာကြောင့်ပါ... ဂန္နာဆိုတာ စစ်တပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး ရာထူးတိုးခါနီးမွ စိတ်မပါလို့ ထွက်လာပြီး မိန်းကလေးရှင်တိုင်းက ငြင်းလွှတ်တဲ့ တရက္ကို ၂ ကြိမ် ရန်ဖြစ်သူ တယောက်ပါ... ကောင်းတဲ့စိတ်က မတရားတာဆို လက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်သလို သူ့ဦးလေးရဲ့ တရားပြင်ပ ကိစ္စဆို လိုက်ဖြေရှင်းပေးတာပါပဲ... ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့ သား ဒါနူမှာ နိုင်ငံခြားနဲ့ သေဘာတူထားတဲ့ ဆီပရောဂျက်ရှိပါတယ်... အဲဒီပရောဂျက်အတွက် ဆီပိုက်လိုင်း ဖြတ်သန်းရာ နယ်တွေမှာရှိတဲ့ လယ်ကွက်တွေကို မတရားသဖြင့် လိုက်သိမ်းပိုက်နေပါတယ်... ၀န်ကြီးချုပ်သားကလဲ ဖြစ် လက္ကလဲ မရွံ့တော့ သူ့အမှုဆို လက်ရှောင်ကြတာ များပါတယ်... ဟန္စီသာဆိုတာ သူ့အဖေ ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အမတ်ဖြစ်နေသူလေးပါ... တိုင်းကျိုးပြည်ပြု လုပ်ငန်း လုပ်နေရင်း ဂန္နာက သတို့သမီးလောင်း နောက်တယောက်ကို ကြည့်ဖို့အသွားမှာ မျက်စိကျပြီး ချစ်ခွင့်ပန်ခြင်းခံရသူပါ...... အစပိုင်းမှာတော့ ဂန္နာကို လူပေလူလွင့် အားနေရင် ရန်ဖြစ်သူလို့ ထင်ပေမယ့် ဂန္နာရဲ့ လူသားဆန်မှု၊ ဥပေဒက မစီရင်ပေးနိုင်တာကို တရားမျှတအောင် လုပ်ပေးမှုတွေ ကြောင့်နောက်ဆုံး လက္ထပ္ဖို့အထိ ဖြစ်လာသူပါ... .. သို့သော် လက်မထပ်ခင် ဂန္နာကို ကတိတခုတောင်းပါတယ် နောက် ဘယ်တော့မှ ဘယ်အကြောင်းနဲ့မှ ရန္မျဖစ္ဖို့ပါ... ဂျာနူး... သူမကေတာ့ ဂန်နာအဖေ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့ သမီးပါ... ဂန်နာနဲ့ ထိမ်းမြားဖို့ သွားကြည့်ခိုင်းတဲ့ သတို့သမီးတယောက်ပါပဲ... တဖက်မှာလဲ ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့သားဖြစ်သူက မတရားသဖြင့် လယ်မြေတွေ သိမ်းပိုက်မှုကို တွန်းလှန်နေသူတယောက်လဲ ဖြစ်ပါတယ်... ဂန်နာက အမတျမလေးနဲ့ ဘယ်လို ဆက်သွားမလဲ??? ဂျာနူးကရော သူတို့ နှစ်ယောက်ကြား ဘယ္လို ၀င်လာမလဲ??? ၀န်ကြီးချုပ်သားနဲ့ရော ဘယ်လိုတွေ ထိပ်တိုက်တွေ့စရာ ကိစ္စတွေ ကြုံလာမလဲ??? ဘယ္လို ပညာပေးမလဲ??? အက်ရှင်တွေကရော ဘယ္လို ခ်မလဲ ဆိုတာကို တော့ အာလူးအာဂျွန်ရဲ့ "လူမှန်" ကားလေး ရှုစားကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ် Kyaw Zay Yar Linn 21 Jun · 49K views
ကုလား ဇာတ်ကြမ်းကား (မြန်မာစာတန်းထိုး) Post = Phyo Aung Crd = gold channel Like and share
ကုလား ဇာတ်ကြမ်းကား (မြန်မာစာတန်းထိုး) Post = Phyo Aung Crd = gold channel Like and share အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်အရွယ် ကောင်းလေးတစ်ယောက်ပါ 12 Sep 2018 · 9K views
အနက်ရှိုင်းဆုံးအာကာသခရီးစဉ် ************************************ မြန်မာစာတန်းထိုး
အနက်ရှိုင်းဆုံးအာကာသခရီးစဉ် ************************************ မြန်မာစာတန်းထိုး ကမ္ဘာစကြာင်္ဝဠာ နှင့် ဗဟုသုတများ7Sep · 11K views